Momba anay - Shaoxing Starke Textile Co., Ltd.
SHAOXING STARKE TEXTILE CO., LTD dia natsangana tamin'ny taona 2008, manokana ny lamba voatenona sy ny lamba voatenona.
Ny orinasa tsirairay dia samy manana ny kolontsainy avy. Starke dia mifikitra hatrany amin'ny filozofia momba ny varotra, "Customer First, Eager to Progress". Miorina amin'ny foto-kevitry ny "Fahamarinana Voalohany", manangana fiaraha-miombon'antoka fandresena amin'ny mpandraharaha hajaina izahay, ary miara-miasa hahatratra ny fahombiazan'ny mpanjifa ary hamorona marika malaza "STARKE"!
Ny orinasa mahomby dia miankina amin'ny ekipa tsara. Starke dia manana ekipa mpivarotra matihanina sy mahay eo ambany fitantanana tsara. Miaraka amin'ny fientanam-po sy ny hery, ny ekipanay dia eto foana hanome ny serivisy feno sy avo lenta. Ny tanjonay dia ny hanome valiny marina sy mahafa-po amin'ny filàn'ny mpanjifanay samihafa ary hametraka fifandraisana maharitra amin'izy ireo.
Ny orinasanay dia manana mari-pankasitrahana toy ny GRS, OEKO-TEX 100, ary ny orinasan-doko sy fanontana miaraka dia manana mari-pankasitrahana toa an'i OEKO-TEX 100, DETOX, sns. Amin'ny ho avy, hiezaka izahay mba hamorona lamba fanodinana bebe kokoa ary handray anjara amin'ny tontolo iainana manerantany.
Ny vokatray dia ny: Lamba vita amin'ny lamba sy lamba vita amin'ny tenona. Ny lamba volontsika dia misy volon'ondry Jacquard, lamba matevina matevina, lamba lamba famaohana, lamba volon'ondry Coral, kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy, Spandex Flock, Véltètre lafiny iray ary lafiny roa, volon'ondry iray lafiny, Berber Fleece, 100% Cotton CVC 100% Polyester Single Jersey, Beads Fishnet Fabric, Honeycomb Fabric, Rib Fabric, Warp-knitted Mesh, 4-way Spandex Fabric, sns Ny Woven Fabric dia ahitana T / R Suiting Fabric, 100% Akanjo vita amin'ny landihazo / PC, Lamba vita pirinty vita amin'ny landihazo 100% ary lamba vita amin'ny landihazo / TC / TR Jacquard 100%